HOME – Page 3 – Voice of Somalis In Exile
Queen Elizabeth oo Carone ku dhacay:
(WAR)-Axad, 20/02/2022-London: Boqoradda Ingriiska Queen Elizabeth ayaa waxaa laga helay xanuunka Cronavirus, sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka boqortooyada Ingriiska. Arrintan ayaa timid, ka dib markii wiilkeeda Prince Charles laga helay xanuunka Caronavirus, waxaana warbixintu intaa ku dartay, in aaneey xanuunkeedu waaleyn oo ay dareemeyso astaamo sardhaban ah, […]
Axad, 13th of Febraayo, 2022 (Muqdisho) Waxaa goordhow ku geeriyooday magaalada Muqdisho, ee caasimadda Soomaaliya, allaha u naxariistee, abwaankii ku caan-baxay luuq-curinta heesaha ugu badan ee Soomaaliyeed, Cabdikariin Faarax Qaareey oo lagu naaseeysi jiray (Cabikariin Jiir). Marxuum Jiir oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuun uu la dhul-jiifo uu haayey ayaa saakayto […]
(War)-26/11/2021-Jimco-AminaWehelie.Me- Nooca covid 19 ee loo baxshay NU ayaa soo gaaray Yurub, waxaana laga helay qofkii ugu horeeyey oo ku nool dalka Belgium-ka. Shaybaarka kulliyadda Leuven ayaa heshay nooca NU ee tirsigiisa shaybaar laga dhigay B.1.1.592, ka dib markii 22-kii bishaan November gabar dhaliyaro ah oo aan talaalneynin laga helay. […]
(WAR)-28/09/2021-Khamiis: AminaWehelie.Me- Mulkiilaha facebook Mark Zuckerberg,ayaa xilli dhow, muqaal toos ah oo uu ka soo tabinayey barta uu ku leeyahay facebook oo soconayey saacad ka badan wuxuu shaaca kaga qaaday in magaca cusub ee uu yeelanayo FACEBOOK in uu noqonayo META. Aasaasaha isla markaasna ah madaxa shirkada Facebook Mark Zuckerberg […]
Tacsi iyo Taariikh kooban: Waxaa is oo gaartay Allaha u naxariistee, geerida Fannanad Maryan Cabdulle Geeseey. Maryan Cabdulle Geeseey waxeey ka tirsanayd Fannaniinta Hoobalada Waaberi qeybta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, markii dambana waxeey ahayd, jilaayad fir-fircoon oo wax ka matasha, riwaayadaha nooceey doonaanba ha ahaadeenee. Mar beey ahayd macallimad dhallinyarada […]
Arbaco 7th Of July,2021-ka- USA – Madaxweynihii hore ee Maraykanka, Donald Trump ayaa dacweynaya lacagna ku dalacaya, baraha bulshada ee kala ah: Facebook, Youtube iyo Twitter. Trump ayaa tallabadaan qaadaya, ka dib markuu ka quustay in milkiilayaasha barahaan bulsho, ay ka daayaan xayiraadaha ay dul dhigeen. Trump ayaa dacwadaan u […]
War-Isniin-07/06/2021-ka: London-Sir David King oo hore u ugu ahaa madaxa la-taliyayaasha saynisyahannada ah ee United Kingdom ayaa sheegaya, in xaaladda Covid-19 ee hadda ka jirta UK ay cadeyn u tahay kicin seddexaad oo xanuunka coronavirus ah in uu soo socdo. Sir David, ayaa faahfaahiyey arrintan wuxuuna sheegay, in 5,300 oo […]
Talaado 11st May, 2021- Gaza- Sida ay soo werinayaan warbaahinta caalamka ee kala duwani, afar iyo labaatan qof oo Falastiin u dhashay iyo 2 Isaa’raaiil u dhashay ayaa ku dhintay iska hor imaadyadii ugu dambeeyey ee ay fooda is dareen, falastiiniyiin deggan Gaza iyo ciidamada Israa’iil. Rabshadahaan ayaa socday si […]
Isniin, 5th of April, 2021 (AminaWehelie.Me): Raisulwasaaraha Britian Boris Johnson, ayaa shaaca ka qaaday goorta la furayo, dukaamanka aan daruuriga ahayn ee wadanka. Tan iyo sanadkii hore ayaa Uk waxaa saarneyd, xayiraad lagu soo rogay oo dhinaca isu socotka dadweynaha ah, tasoo ah dadaal lagu doonayo in la yareeyo faafista […]